makomputa uye internet | Ruzivo runoshanda kumunhu wese.
Rudzi: makombiyuta uye internet
Power Bank - chii icho? Hiper simba bhangi
Kushanda kushanda nemidziyo nekukurumidza kunodhonza bhatiri. Vanhu vazhinji vakasangana nemabhatiri akafa panguva isiri iyo. Nehurombo, iwe haugare uine mukana wekubuda kana chajaja. Sei ...
Kuzivikanwa kweruoko. Zvirongwa zvipi zvichabatsira neizvi?
Dzimwe nguva muridzi wekombuta yake anotarisana nebasa rakaomarara - kushandura zvakanyorwa nemaoko kuva zvemadhijitari. Ehezve, iwe unogona zvakare kuita iri basa nemaoko. Nekudaro, iyi nzira inoenderana ...
Minecraft: mapfumo. Maitiro ekuroya munondo muMinecraft
Paunotanga kuoneka mune yeMinecraft nyika, hauna kana chinhu. Iwe uchafanirwa kutora ako ekutanga zviwanikwa nemaoko ako asina maoko uye, nerubatsiro rwavo, gadzira ako ekutanga zvishandiso izvo ...
Isu tinotamba mhedzisiro, kana Maitiro ekudzima zvido muSims-3?
Vanhu vanodei? Uyu mubvunzo unogona kupindurwa nenzira dzakasiyana, asi chero mhinduro ichave isina kukwana. Imhaka here yekuti tese takasiyana? Kwete, nekuti zvinangwa zvakajairika zvakanyanya kwazvo ... Zvese ...
Mashandisiro ekushandisa makoni pane Aliexpress: mirairo yekutenga
Wese munhu anoziva nezvekutengesa chikuva senge Aliexpress anogona kusevha yakawanda pakutenga. Kune akawanda zvigadzirwa pane ino Chinese saiti, mitengo yatove yakadzikira zvakanyanya kupfuura mitengo yemusika. Vazhinji vakareba ...
"Muroyi 3": kufamba. "Pfuma yeCount Royven", nyaya yekutsvaga
Muroyi 3 ndeye RPG yakashamisa chose munhu wese. Ehe, chekutanga uye chechipiri zvikamu zveiyo purojekiti zvaive zvatova hunyanzvi, asi chechitatu chakazove chiri nani, zvichipa mutambi rusununguko rukuru rwekuita mu ...
Chii chinonzi teletype mufoni?
Vamwe vashandisi vefoni, vachitsvaga mukati megadziriro, vanosangana neshoko risinganzwisisike TTY kana chirevo "Teletype modhi". Zvakare, hunhu icon inogona kunge iripo mune yemamiriro bar yeiyo smartphone. Chii chinonzi TTY pafoni? Yechii…
Maitiro ekuisa Google Chrome pakombuta. Mirayiridzo kune vanotanga
Unogona kushamisika, asi nhasi havasi vese vashandisi vanoziva kuisa Google Chrome pakombuta, uye izvi zviri kunyangwe hazvo kuti iyi bhurawuza yanga iri mutungamiri asina kupokana pakati ...
Anotaridzika Graphics uye System Inodiwa kune Crysis 3
Crysis. Pane zvakawanda pane iri izwi pane kungori iro zita remupfuri. Uyu mutambo unogara uchigamuchira rinokudzwa zita muchikamu "Zvakanakisa Graphics". Chikamu chega chega chitsva chinoisa bhawa rinotevera iro munhu wese anotungamirirwa ne ...
Ndezvipi zviri nani - PS3 kana Xbox 360? Kutsvaga mhinduro
Zvakanaka, isu pakupedzisira takachengeta imwe mari uye takagadzirira kuzadzisa yedu yekare kurota uye tenga yakanaka mutambo koni! Isu tinoshuvira kupinda munyika inonakidza uye inonakidza yemitambo uye kuzvipira kwariri ...
Easter zai mumutambo - chii icho? Mazai eIsita ane Outlast, Minecraft uye GTA-5 mitambo
"Izai reIsita" ndiro zita rekuti "mazai eIsita" mumitambo, mafirimu, software. Icho chiri chakavanzika, icho chemukati chisingakodzere mune zvakajairika zvemukati, chinotaridzika chisingabvumike, chisina musoro uye kazhinji ...
Mamwe Makanzura eWarcraft 3: Chakavanzika Chigaro. Tsananguro
Mimwe mishandirapamwe yeWarcraft 3: Chigaro cheFrozen chakatanga kuoneka nguva pfupi mushure mekuburitswa kwemutambo wekutanga. Kunyangwe mushure memakore gumi, vanoramba vachizivikanwa. Mishandirapamwe inogadzirwa neese mafeni uye mafemu emitambo ...
Maitiro ekurambidza munhu muVKontakte: kudzidza maitiro ekuita "dema rondedzero"
Nhasi tichataura newe nezve nzira yekurambidza munhu muVKontakte. Zvakare, ngatiedzei kufunga nemi kuti iri basa rinotipei. Hazvingave zvisina basa kuvhara nekutarisa ...
"Marogo eUSSR" - mitemo yemutambo
Kana iwe uri muridzi weye nhare mbozha inomhanya iyo Android OS, ipapo ungangodaro wakadzora akasiyana mafomu, kusanganisira mitambo, pairi kanopfuura kamwe. Nhasi takusarudza iwe ...
Chii chinonzi zita rechirongwa chekugadzira mharidzo? Tsanangudzo yezvirongwa zvekugadzira mharidzo
Kana uchibvunza mubvunzo wekuti chirongwa chekugadzira mharidzo chinonzi chii, vanhu vazhinji hapana mubvunzo vane hukama neakakurumbira PowerPoint chirongwa kubva kuMicrosoft. Iyo yakagadzirirwa kugadzira zvigadzirwa zveakasiyana ...
peji 1 peji 2 ... peji 949 Next Page
Mibvunzo ye52 mu database yakagadzirwa mu 1,888 masekondi.